DeaDBeeF: သေးငယ်သော၊ Modular နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သောအသံဖွင့်စက်။ | Linux မှ
ဒီနေ့အလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော application တစ်ခုကိုထပ်မံလေ့လာပါမည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်မှ ၈ နှစ်အကြား၊ ဒီမှာကျွန်တော်စကားပြောခဲ့သည်။ "FromLinux"။ ဒီ app က "DeaDBeeF".
"DeaDBeeF"တိုတိုမှာအလွန်ကောင်းသည် အလွန်သေးငယ်သော modular နှင့်စိတ်ကြိုက် audio player။ မည်သည့်အရာကိုမဆိုသိပြီးကြိုးစားသင့်သော app တစ်ခု GNU / Linux Distro။ ပေမယ့်လည်းအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည် Windows နဲ့ Mac OS.
ငါတို့အရင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည် 10 အနှစ် ၎င်းသည်၎င်း၏ဗားရှင်း ၀.၄.၀ နှင့်အခြားနှစ်များအကြာတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤအက်ပလီကေးရှင်းမည်မျှပြောင်းလဲသွားသည်ကိုလေ့လာလိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပထမဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးလင့်ခ်ကိုချန်ထားလိုက်သည် ဆက်စပ်သောယခင် post နှင့် "DeaDBeeF".
သိကောင်းစရာများ - Deadbeef ဗန်း၏အိုင်ကွန်ကိုပြောင်းပါ
1 DeaDBeeF - GNU / Linux အတွက် modular အသံဖွင့်စက်
1.1 DeaDBeeF ဆိုတာဘာလဲ။
DeaDBeeF - GNU / Linux အတွက် modular အသံဖွင့်စက်
ယင်း၏အတွက် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပါ -
"DeaDBeeF (0xDEADBEEF ၌ကဲ့သို့) သည် GNU / Linux၊ * BSD, OpenSolaris, macOS နှင့်အခြား UNIX ကဲ့သို့သောစနစ်များအတွက် modular audio player ဖြစ်သည်။ DeaDBeeF သည်အသံဖိုင်အမျိုးမျိုးကိုဖွင့်ရန်၊ ၎င်းတို့အကြားပြောင်းလဲရန်၊ သင်လိုချင်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်းအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်နှင့်သင် ထပ်မံ၍ ချဲ့ထွင်ရန် ထပ်မံ၍ ပြုလုပ်နိုင်သည့်ပလပ်အင်များစွာကိုခွင့်ပြုသည်။"
ပုံစံအမြောက်အများကိုကစားသည်။ အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။ mp3, ogg vorbis, flac, ape, wv / iso.wv, wav, m4a / m4b / mp4 (aac and alac), mpc, tta, cd audio နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ လူသိများသော Nsf၊ ay, vtx, vgm / vgz, spc နှင့်အခြားလူကြိုက်များသော chiptune ပုံစံများအပြင် နှင့်များစွာသောအခြားသူများ FFMPEG ကိုအသုံးပြု။
စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်အောက်ဖော်ပြပါပုံစံများဖြစ်သော ID3v1, ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4, APEv2, Xing / Info, VorbisComments အပြင်အခြား tag / metadata formats တော်တော်များများကိုဖတ်ရှုခြင်း။ ထို့အပြင်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်များအရ၊ ၎င်းတွင်စိတ်ကြိုက်နယ်ပယ်များအတွက်ပံ့ပိုးမှုပေးသောအရည်အသွေးမြင့် tag အယ်ဒီတာတစ်ခုရှိသည်
၎င်းသည် Cuesheet နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောသဟဇာတဖြစ်သည်အယ်လ်ဘမ်ကိုအလိုအလျှောက်လမ်းကြောင်းခွဲခြားပေးတဲ့နည်းပညာ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ Cuesheet အထောက်အပံ့ (.cue ဖိုင်များ)၊ ဇာတ်ကောင်စုံထောက်လှမ်းခြင်း / ပြောင်းလဲခြင်းအပါအ ၀ င်။ ထို့အပြင်အခြားအရာများအနေဖြင့်၎င်းသည် m4b audiobooks, ogg files နှင့်အခြားဘုံပုံစံများစသည့်ရွေးချယ်ထားသောပုံစံများမှအခန်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကျစ်လစ်ပြီးထိရောက်မှုရှိသည်ဖြေ - အားလုံးကအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးဖို့အတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီရဲ့မူလ user interface toolset ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် Unix system ပေါ်တွင် GTK2, GTK3, ALSA နှင့် PulseAudio ကိုအသုံးပြုသည်။ နှင့် Mac ပေါ်တွင်ကိုကိုးနှင့် CoreAudio ။
တေးဂီတကိုစီစဉ်ရန်တိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးပါဖြေ - ဖိုင်စနစ်ကနေတိုက်ရိုက်ဖွင့်နိုင်တဲ့ဖိုင်တွေကိုကစားသမားထဲသို့ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည် tabs (သို့) playlist browser များမှတဆင့်များပြားသော playlists များကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Foobar2000 နှင့်လိုက်ဖက်သောအဆင့်မြင့်ခေါင်းစဉ်ပုံစံ script များကို အသုံးပြု၍ သင်လိုချင်သောအစီအစဉ်အတိုင်းကစားနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းများကိုအမျိုးအစား ခွဲ၍ စုစည်းနိုင်သည်။
ရရှိနိုင်သည့်ပလပ်ဂင်အမြောက်အမြားဖြေ - DeaDBeeF player ကိုလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေနဲ့တိုးချဲ့ပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးချဲ့နိုင်တဲ့အပိုဆောင်းအစိတ်အပိုင်းများအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသောများ၏ repositories ကိုအများစု၌တည်၏ GNU / Linux Distros, "DeaDBeeF" သင်၏အမည်ကို သုံး၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည် အထုပ်မန်နေဂျာ အသုံးပြုခံ့။ အောက်ကဥပမာမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရိုးရှင်းတဲ့ command ကိုပြပါ -
၎င်းကိုသင်၏တိုက်ရိုက်ကူးယူခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည် download အပိုင်းနှင့်၎င်း၏ executable ခေါ်ဖြင့်တိုက်ရိုက် run "သေပြီ"။ နေစဉ်၎င်း၏ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သော၏အသုံးပြုမှုကိုစေရန် ပလပ်ဂင်များ သင်သည်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် add-ons အပိုင်း.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ personalization ၎င်းသည်ရှင်းပြရန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသင်ခန်းစာပါသောအောက်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ DeaDBeeF - တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် plugins အသစ်များ။ သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရယူရန်၎င်း၏တရားဝင်ဆိုဒ်ကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် SourceForge y GitHub.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «DeaDBeeF», ခေတ်မီရိုးရှင်းသောနှင့်ရိုးရှင်းသော GNU / Linux အတွက် modular အသံဖွင့်စက်၎င်းသည် multiplatform ဖြစ်ပြီး၎င်း၏လက်ရှိ add-ons များ (plugins) များကြောင့်အထူးပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်းအတွက်ထူးကဲသောစွမ်းရည်ရှိသည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » DeaDBeeF: သေးငယ်သော၊ Modular၊ စိတ်ကြိုက်အသံဖွင့်စက်